Ma garan Kar Taa Astaamaha Lagu Garto Qofka Is Gaad Gaadka Kugu Haya, oo Meel uu Wax ka Bilaabo Garan la’ | Gaaloos.com
Home » galmada » Ma garan Kar Taa Astaamaha Lagu Garto Qofka Is Gaad Gaadka Kugu Haya, oo Meel uu Wax ka Bilaabo Garan la’
Ma garan Kar Taa Astaamaha Lagu Garto Qofka Is Gaad Gaadka Kugu Haya, oo Meel uu Wax ka Bilaabo Garan la’
Qayb wayn ayuu dhaqdhaqaaqa jirku ka yahay wada hadalka labada qof, sida madaxa marka la luxayao oo macnaheedu noqon karto “haa” ama “maya”. Inaga oo aan ogayn ayaan dhaqdhaqaaqa jirkeena ku muujinaa dareenkeena iyo waxa aan ku fikrirayno. Waa kuwan calaamdaha aad ka arki kartid in qofka aad is gaad gaadaysaan ku xiisaynayo iyo inkale
Hadii qofka balanka aad la leedahay meel wada fadhidaan oo sheeko idiin socoto uu dib u fadhiisto, madaxana taagayo oo dhinacyada fiir fiirinaayo ayaa waxa uu ku tusayaa isla qabwayni. Waxa ka sii daran hadii uu qofku gacmaha saarto qoorta oo ka dhigan yasid. Hadaba qofkaasi uma qalma xiisaha aad u hayso ee sheekada iyo shaahaba uga tag.
Hadii uu qofku isaga oo kula sheekaysanaya madaxa yara qaloociyo ayaa waxa ay ka dhigan tahay soo dhowoow. Waxa kale oo la mid ah qofka oo indhaha kaa fiirinaya, kuu ilko cadaynaya ama madaxa kuu luxaya. Markaa adiguna ahow qofka la xiisaynayo.
Ilkocadaynta ayaa inta badan loo turjuntaa waji furan laakiin ay wanaagsan tahay in aad ogaatid:
In ilko cadayntga uu qofku ku tusayo ilkaha sare oo kaliiya ay ka dhigan tahay saaxiibtinimo aan wax kale ka dambayn. Qofkuna aanu rabin in aad xiriir jacayl wada yeelataan.
In ilko cadaynta dibinta hoose la dibciyo ay ka dhigan tahay is fahan yar oo ka dhex abuurmay labada qof.
Laakiin Dhaayaha.com ayaa ku leh calaamadaha aadka u sheegaya dareenka xiisaha badan ee uu qofku qabo ayaa ah: Raga oo jeebabka gacantga galiyo iyo haweenayda oo goonadeeda toosisa ama lugaha xoqota.
Title: Ma garan Kar Taa Astaamaha Lagu Garto Qofka Is Gaad Gaadka Kugu Haya, oo Meel uu Wax ka Bilaabo Garan la’